99designs: Crowdsourcing yako Logo uye Web Dhizaini
Chitatu, November 25, 2009 Muvhuro, July 8, 2013 Douglas Karr
Ini ndangobva kunyora nezve ruzivo rwangu ne kuwanda kwemagadzirirwo ako. Chiitiko ichi chaive chakanaka uye ini ndakakurukura iyo Kwete Chaicho kufamba uye kushora kwenzvimbo senge iyo. Kubudikidza nechitsigiro posvo, vhiki ino ndakaedza 99designs.
Chiitiko pane 99designs chaive chakafanana uye, ndinovenga kuzvitaura, zvakadaro zvese zviri nyore uye zvinonakidza. Ndakafunga kubhadhara nyowani Twitter kumashure izvo zviri nani kukwidziridzwa kambani yangu, blog yangu uye masevhisi angu. Ndakabhadhara madhora zana + nemadhora makumi mashanu mubhadharo… iwo madiki uye pazasi pe 100designs inokurudzirwa huwandu.
Hechino chekupinda icho chandasarudza semuhwina kune yangu nyowani Twitter kumashure:
Iye munyori akashandisa kumashure kwaive kuripo kuburikidza neyemahara Wallpaper saiti uye ndokumisikidza iwo madhiri andakakumbira zvakananga pairi. Mune mafambiro angu, ini ndakakwanisa kunwisa uye nekupa yakananga mhinduro pane yega dhizaini uye kune yega dhizaini. Vamwe vevagadziri vanga vachinyatsosvika padyo… Ini chaizvo ndainzwa kushata kusatenge akawanda dhizaini!
Maitiro e 99designs anonyatso kufumura kushaya simba mune yechinyakare graphic dhizaini indasitiri. Ndiine 99designs, ini ndakakwanisa kuwana akasiyana siyana akasarudzika emhando yepamusoro kutumira pamwe nezvimwe zvaive zvishoma kunze kwebhokisi. Izvi zvaive chirongwa changu chekutanga cheartist pane 99designs uye vakakunda! Iyo nyanzvi yakatora ruzivo rwangu ndokugadzira kumashure kwakange kwakasiyana nechero mamwe magadzirirwo. Yakachena uye yakachena - asi ichiri yepamusoro-tech.
Kune 51,000 vagadziri mune 99designs nharaunda inoisa nyowani dhizaini kune saiti yega yega 10 masekondi. 99designs yakavhurwa maawa makumi maviri nemana pazuva, mazuva manomwe pavhiki uye mazuva ese egore. Haisi chete sevhisi kune vanhu vasingakwanise kugadzira dhizaini zviwanikwa, chero. 24designs yagadzira zvigadzirwa zve Mufundisi Rick Warren (Munyori weiyo Chinangwa Chinotungamirwa Hupenyu) chebutiro rebhuku rake rinotevera,
ari SxSW Yepamutemo T? Shirt Project uye kunyange Dish Network's van kuputira dhizaini.
Zvichava zvichandiomera kuti ndigare kure nemasevhisi aya. Ini ndinonyanya kusarudzika nevakagadziri uye ndiri shamwari dzakanaka (ndinovimba ndichiri…) nevakawanda. Ini ndinogara ndichifarira uye ndinoshamiswa nezvavanokwanisa kuzadzisa. Zvinongova kuti masevhisi aya anondipa nemhando dzakasiyana dzesarudzo dzandisingakwanise kuwana kuburikidza neyakajairika mafemu ekugadzira uye kudyidzana.
Chinhu chimwe chete chandinoshuvira 99designs wakaita yaibvumidza maartist avo kuti vazvisimudzire ivo nemafemu avo pane 99designs. Ndinoona kuti ini ndichave nemukana wekupfuura 99designs fizi kana ndikakwanisa kuenda zvakananga kune muimbi - asi ndizvo hazvishandi kupihwa zvakanakira iyo system. Ndingadai ndichiri kushandisa 99designs pandinenge ndichida kukanda chimwe chinhu kunze uko kuti ndiwane dzimwe pfungwa dzekugadzira kumashure ...
Tags: kanoni logohombe faira kuchinjisaPythonRuby
Mbudzi 25, 2009 na4: 31 PM
Kutenda nekugovana ruzivo rwako Douglas!
Zvita 20, 2009 na2: 16 PM
Ini ndakashandisawo iyi kumashure kune yangu Tumblr peji zvakare. Ini ndinonyatsoda iko kuve nyore uye runako rweiyi dhizaini!